ခုလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ပျံ့နှံ့နေချိန် မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုး သင့်သလား…? – Na Pann San
ခုလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ပျံ့နှံ့နေချိန် မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုး သင့်သလား…?
Na Pann | May 22, 2020 | Knowledge | No Comments
အ ခု လို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ပျံ့နှံ့နေချိန်မှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုး သင့် သလား ?…
ဒါ နဲ့ ပတ် သက် လို့ ( ၃ ) ခု ကို သိစေချင် ပါတယ် ။
၁။ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးဟာ တုပ်ကွေးကို ကာကွယ်တဲ့ဆေးပါ။ ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့က ရောပြီး ကိုဗစ်ကိုပါ ကာကွယ်နိုင်သလို ပြောကြတာတွေရှိ ပါတယ် ။ ကိုဗစ် အတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိပါ။ တုပ်ကွေးကိုတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖျားနာတဲ့အခါ ကိုဗစ်မှန်းသိရတာပေါ့ဆိုတာမျိုးလို ပြောကြ တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဖျားတဲ့ အခါတိုင်း ကိုဗစ်ပဲ ရှိတာမဟုတ် ပါဘူး ။ တခြားအကြောင်း အရာတွေလည်း ရှိနိုင်သေးလို့ ကိုဗစ်မှန်းသေချာ သိဖို့က swab ယူစစ်ဆေးမှု လုပ် ကို လုပ်ရမှာ ပါပဲ။
၂။ လက်ရှိမှာ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးတွေ ဟာ ဈေးကြီးနေ ပါတယ် ။ ဘာလို့ဈေးကြီးလဲ ဆိုတော့ အဖြေက ရိုးရှင်း ပါတယ် ။ ဈေးကွက်သဘောအရ ဝယ်လိုအားများ ရင် ဈေးကတော့ တက်မှာ ပါပဲ ။ လူတွေစုပြုံဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဈေးနှုန်းက တက်လာမှာ ပဲ ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို နှစ်တိုင်းမြင်ဖူးနေကျပါ။
တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့် သူတွေကတော့ ကလေးငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နှလုံး ဆီးချို သွေးတိုးစသဖြင့် နဂိုရောဂါအခံရှိပြီး ကိုယ်ခံအားနည်းနေ တဲ့သူတွေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ သူတွေပါ ။ ကိုယ်က သွားလာစားသောက်နေနိုင်တယ်၊ လူငယ်လူရွယ်သန်မာဖြတ်လတ်တယ် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်း ပါတယ် ။
အဲဒီလိုမျိုး ခွဲခြား မှုမ ရှိဘဲ လူတိုင်း တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးတွေ ဝိုင်းဝယ်နေရင်တော့ ဈေးတက်ပြီး တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဆီကို မရောက်ဘဲဖြစ်မှာပဲ။ Mask (နှာခေါင်းစည်း) ကိစ္စ မှာလည်း ဒီလိုပဲဆိုတာကို မြင်နိုင် ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ ထိုးတာ ကို ကျွန်တော်ကတော့ ဆန့်ကျင် ပါတယ် ။
၃။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပေမယ့်လည်း တုပ်ကွေးဖြစ်နိုင်ပါသေး တယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုး ထားတယ် ဆိုပြီး ငါကတော့ ရောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူး သတ်မှတ် ကာကွယ်ရေးတွေမလုပ်ဘူး ဆိုရင် တုပ်ကွေး တင် မကဘဲ ကိုဗစ် လည်း ကူးစက်နိုင် ပါ တယ် ။
လက်ဆေးတာ၊ နှာခေါင်းစည်း တပ်တာ ၊ လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေ ကိုရှောင်ရှားတာ၊ မျက်နှာကိုလက်နဲ့ ထိတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင် တုပ်ကွေးရော ကိုဗစ်ရောအပြင် တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါ မ့် မယ်။
သစ္စာမရှိတဲ့ ကောင်မလေး ကို ဟိုတယ် တစ်ခု ရဲ့ အခန်းမှာချိန်းပြီး ကလဲ့စားချေလိုက် တဲ့ ချစ်သူကောင်လေး…
ဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ကြီး ဟောကြား တဲ့ သိမ်ထွက် ရဟန်းသစ်များ ကို ဖျက်ဆီးခြင်း ( ၂ ) မျိုး
ဖုန်း အကြည့်များ ၍ မျက်ရိုး ကိုက်တတ်သူများ နဲ့ မျက်မှန်တတ်နေရ သူများအတွက် မျက်မှန်လွတ်စေတဲ့နည်း (မျက်ကြည် စားဆေး )
ကျောက်တည် ဝေဒနာရှင် များ သောက်ဖြစ်အောင် သောက်ကြည့် ပါ..ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ